Karohina sy arahi-maso fatratra: polisy ny atidoha mpampanofa basy ireo jiolahy | NewsMada
Efa nampoizin’ny maro. Fantatra izao fa polisy ihany ny miray tsikombakomba amin’ireo jiolahy ary mampanofa ny fitaovam-piadiana (basy, bala…) ampiasaina amin’ireo fanafihana mitam-piadiana ao Toamasina. Mandeha ny fanaraha-maso sy ny fikarohana azy ireo.
Nidoboka ao amin’ny fonjaben’Ambalatavoahangy rehefa avy natolotra ny fampanoavana, afakomaly, ireo jiolahy telo tompon’antoka tamin’ny fanafihana ny Accès Banque ao Bazarikely, ny 8 mey 2019 lasa teo. Araka ny fanazavan’ny polisy nisambotra azy telo lahy ireto, fantatra fa polisy (mbola karohin’ny polisy ao Toamasina amin’izao fotoana izao) ihany koa ny mpampanofa basy amin’ny fanafihana mitam-piadiana ao Toamasina. Raha ho an’ny fanafihana ny Acces Banque, tambajotran-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika ireto tratra ireto, nahitana an’i Célestin, i Moussa ary i Marco, raha mbola ifampitadiavana kosa i Bolo sy i Ngita, ireto roa lahy ireto no fantatra fa mihazona ilay basy PA telo fampiasan’ireto andian-jiolahy mpanao fanafihana mitam-basy ao Toamasina renivohitra ireto. Nohamafisin’ny polisy hatrany fa tsy sarotra ny namantatra azy ireo sy nikaroka ny vaovao rehetra momba azy telo lahy tratra ireto noho izy ireo tsy nisaron-tava, na iray aza, nandritra ny fanafihana ny Acces Banque ao Bazarikely. Nambaran’ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy hatrany fa efa fantatra ny toerana fieren’ireto roa lahy mbola karohina ireto ka hisy tsy ho ela ny fisamborana azy ireo.
Lasa ny vola 50 tapitrisa Ar tao amin’ny Acces Banque…
Voalazan’ireo namany voasambotra tsy afa-niala intsony, raha nahita ny sarin’izy ireo tratry ny “camera de surveillance”, fa izy ireo koa no tompon’antoka tamin’ny fanafihana ny tranombarotra Fortuna ao Tanambao Fahadimy, nahaverezana vola 10 tapitrisa Ar sy ny tranombarotra Tiana Anjoma, nahaverezana vola manodidina ny 10 tapitrisa Ar koa. Farany teo ny fanafihana ny Acces Banque, nahaverezana vola 50 tapitrisa Ar satria lasan’izy ireo avokoa ireo vola tao anatin’ny “caisse” roa misy amin’ity banky ity, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy hatrany. Raha ny angom-baovao natao, tsy ity ekipa tratra ity ihany no ekipan’i Bolo sy i Ngita izay mpitarika ny fanafihana fa manana ekipa hafa koa izy ireo, saingy arakaraka ny fanafihana hatao no hakana ny ekipa miaraka amin’izy ireo.